You are at:Home»မဟာဗျူဟာကဏ္ဍကြီးများ»သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ဝန်ကြီးအားတွေ့ဆုံ
By cms cms on	 17-01-2020 မဟာဗျူဟာကဏ္ဍကြီးများ
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr Song Tao အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၂ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟိုတယ်တွင် ဖိတ်ကြားထားသည့် အခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန၏ ဝန်ကြီး H.E. Mr Song Tao အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၂ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟိုတယ်တွင် ဖိတ်ကြားထားသည့် အခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တွေ့ဆုံသည်။